Uyifaka njani i-beta yokuqala kawonkewonke ye-iOS 10 | IPhone iindaba
Oku kuye kwamangalisa, ubuncinci kwinxalenye: U-Apple usungule i-beta yokuqala kawonkewonke ye-iOS 10 kwimizuzu embalwa edlulileyo.Abantu bethu abaninzi bakholelwa ukuba i-beta yokuqala yoluntu iyakwaziswa kwiveki enye neyesithathu kubaphuhlisi kodwa, njengo Besele behambele phambili kwimithombo yeendaba, iApple itshintshe imephu yendlela ebekiweyo kunyaka ophelileyo kwaye iyenzile IOS 10 yokuqala beta yoluntu Ikhutshwa kwiveki enye neveki yesibini yabaphuhlisi (ehambelana nayo phantse kuyo yonke into).
I-Apple ibhengeze ngaphambili WWDC ukuba i-beta yoluntu iya kufika ngoJulayi, kodwa ayizange inike nawuphi na umhla. Sele sivavanye i-beta yesibini, sinokuqonda ukuba iApple isebenzise kakuhle iiveki ezintathu ezidlulileyo ukusungulwa kwe-beta yokuqala ukumiliselwa kweyesibini kwaye ngebegqibe ekubeni sele ikhule ngokwaneleyo ukuyenza ifumaneke nabani na ofuna ukuyizama.
Uyifaka njani i-beta 10 kawonkewonke
Ukufaka i-beta kawonke-wonke kulula kunokuyenza kunye nohlobo lomphuhlisi kwaye akuyi kufuneka sikhangele iprofayile okanye ufake i-Xcode 8 beta. Siza kuyenza ngokulandela la manyathelo:
Makhe siye kwi Iphepha leprogram yesoftware ye-beta kusuka LONTO. Singakwenza oku nakweyiphi na ikhompyuter, kodwa ukuba siyenza yonke inkqubo ukusuka kwisixhobo esifuna ukufaka kuso i-beta, kungcono.
Sidlale kwi Culela phezulu (rhuma. Ukuba sele ubhalisile, yiya ku "Cula ngaphakathi").
Sibeka eyethu I-ID ye-Apple kwaye sadlala Culela phezulu/ Ngena.
Ukuba sinokungqinisisa ngamanyathelo amabini, sixelela isixhobo oza kuwufumana kuwo umyalezo kwaye singena kuwo.
Samkela imigaqo yokusetyenziswa.
Ngoku kwisixhobo sethu se-iOS, siza "bhalisa izixhobo zakho".
Siya ku beta.apple.com/profile, silanda iprofayili kwaye siyifake.
Ukuba usicela ukuba siqalise kwakhona, siyaqalisa kwakhona.
Okokugqibela, siya kuthi Useto / Jikelele / Uhlaziyo lwesoftware kunye nohlaziyo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, i-beta yokuqala kawonkewonke ihambelana neyesibini kubaphuhlisi kwaye, ukuba ufuna ukwazi zonke iindaba ezibandakanyiweyo kule beta yesibini, kuya kufuneka ufunde inqaku lethu Zonke ezi ndaba zibandakanyiwe kwi-iOS 10 beta 2. Ukuba uyayifaka, ungathandabuzi ukushiya amava akho kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 10 » Uyifaka njani i-beta yokuqala kawonkewonke ye-iOS 10, ngoku ekhoyo
UYESU UDAVIDE sitsho
Ngaba le beta inokufakwa xa ipapashwa kwi-iTunes? Okanye iya kuqhubeka ukunika impazamo eyonwabileyo ye-14? Ndineewindows kwaye andikwazi ukufaka i-xcode kodwa ndifuna ukubeka iios 10 ezicocekileyo ...
Phendula kuYESU UDAVIDE
Loluphi uvuyo ondinika lona uPablo ngoku ewe ewe. Andiboni ngxaki ekuphambaneni naye kuba umba wabucala mva nje ndiwuthatha ngokungathí sina. Ke niyazi bafana, musani ukuba nzima, unika ikhonkco ubeke i-id yakho kwaye usebenze ngokulula nangokusemthethweni
Umgcini weFernelis sitsho
Awuyi kuba nakho ukufaka ucoceko lwe-iOS 10 de ibe iyapapashwa, ngaphandle kokuba ukhuphele
Phendula uFernelis Ranger
UCarlos Pizarro Cristi sitsho
Ngomphuhlisi 2, ngaba kunokwenzeka ukuba uye kuluntu 1?
Phendula uCarlos Pizarro Cristi
Akukho mntu (@jmburdalo) sitsho
Ndinomphuhlisi we-beta 2 kwaye ekuphela kwesiphene endisifumeneyo ukuza kuthi ga ngoku kukuba itya ibhetri ngokukhawuleza okukhulu. Ukuphumla kuzinzile kakhulu
Phendula akukho mntu (@jmburdalo)
Ndifuna ukuhlaziya i-OTA, kodwa ngenxa yokuqhekeka kwejele uhlaziyo aluveli. Ndingenza ntoni?? Cima i-tweak?
UOscar Eduardo sitsho
Andilufumani uhlaziyo lwe-ios 10. Kungenxa yokuqhekeka kwejele, kufuneka ndenze ntoni?
Phendula uOscar Eduardo
Andinayo i-jb kodwa kwenzeka into efanayo kum kwaye kwafuneka ndiyibuyisele kwakhona iprofayile ukuze ibonakale
Ndinomphuhlisi we-beta 2 kwaye ndikhuphele nje iprofayile ye-beta kawonkewonke kwaye uhlaziyo alukhutshelwanga, andikwazi ukuya kwi-beta yoluntu?
Ukuba une-beta 2 yabaphuhlisi, awungekhe uye kwi-beta evulekileyo, ubuncinci akukho nto ikhutshelweyo kum
Nam andiyenzi, kodwa ngenxa yokuba ndicinga ukuba baya kuba yinto efanayo. Masilinde ukubona ukuba kwenzeka ntoni xa kuphuma isithathu kubaphuhlisi okanye kwindawo yesibini yoluntu ...
Ngaba iBeta 2 yinguqulelo efanayo neBeta yoLuntu? Okanye ngaba zahlukile ngokwakha?
Inika impazamo xa uzama ukukhuphela uhlobo lwe-beta, ukhuphele iprofayili nge-Apple, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kutheni?!?!?
Emva kokufaka i-beta kunye nokuyivavanya ndifuna ukubuyela kuhlobo lwangaphambili lwe-ios, kufuneka ndikhuphe iprofayile okanye enye into eyahlukileyo.
Ngaba umntu angandixelela indlela yokuthintela ifowuni ekuvulekeni ngokucinezela ekhaya? Akukho nyathelo okanye nantoni na ... ayinakuba njalo
UJosé, kwinto endiye ndayvavanya, ivulwe kuphela ngokucinezela iqhosha lasekhaya ukuba usebenzisa nayiphi na iminwe eneminwe ebhalisiweyo. Ngawo nawuphi na omnye umnwe, awuvulwanga, kodwa ikhibhodi ibonakala ngathi iyafaka ikhowudi yokhuseleko.
Inyaniso kukuba i-iOS 10 ilunge kakhulu, kodwa ke lumka ukuba kule beta ibhetri ityiwe ngokukhawuleza okukhulu. Ndine-iPhone 6 kwaye ihlala usuku kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku andifumananga ngxaki, kodwa abo bafuna iselfowuni ukuba basebenze, kufuneka baqwalasele umba webhetri ngaphambi kokumilisela le beta.
Kuba i-chrome ayihambi, kuya kufuneka uyenze ukusuka kwi-safari, kwimeko enokwenzeka nakomnye umntu.
Uyivavanya njani iBeta yoLuntu ye-iOS 10 kunye neMacOS Sierra